SONSAF ayaa Kulan lagu xoojinayo amniga iyo isdhexgalka Bulshada u qabatay guddi-hoosaadyada degmooyinka magaalada Laascaanood. – SONSAF
SONSAF ayaa Kulan lagu xoojinayo amniga iyo isdhexgalka Bulshada u qabatay guddi-hoosaadyada degmooyinka magaalada Laascaanood.
Waxa maalintii Labaad ka socda gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood kulammada adkaynta Amniga Iyo isdhexgalka Bulshada ee ay soo agaasintay Dalladda SONSAF.
Maantana Waxa Kulanka ka soo qayb galay guddi hoosaadyada degmooyinka ee magaalada Laascaanood iyo xildhibaannada golaha deegaanka degmada Laascaanood. Kulankan ayaa si weyn loogu lafo guray doorka ay guddiyadu ka qaadan karaan xoojinta amniga iyo sidii ay ula shaqayn lahaayeen laamaha amniga.
Guddoomiyaha Dalladda SONSAF Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaa ka soo qaybgalayaashii kulankan u sheegay in aan casharro lagu siinayn balse uu kulankani yahay aqoon is weydaarsi dulucdiisu tahay in bulshada qaybeheeda kala duwani si guud u wada ilaaliyaan nabadgalayada. Waxa isna madasha hadal mahadnaq u badan ka jeediyay Axmed Xasan Casoowe oo Ka tirsan golaha wakiillada Somaliland isaga oo sidoo kale amaanay hawlaha ay SONSAF hayso iyo in aanay ahayn urur ajannabi ah balse ay tahay hay’ad maxalli ah oo kaalin weyn ka ciyaarta amniga iyo doorashooyinka.
Maayir ku-xigeenka degmada Laascaanood Mudane Axmed Maxamed Cumar ayaa ugu danbayntii u mahadnaqay Dalladda SONSAF waxaanu ka qayb galayaasha kula dardaarmay in ay ka faa’idaystaan aqoon isweydaarsigan muhiimadda koobaad iyo ta labaadba ka dhigaan amniga degmada iyo kan gobolka.